Azo havaozina hery
Ahoana no ho photovoltaic rafitra?
Ny toeram-ponenana rafitra photovoltaic mampiasa herin'ny masoandro Modules masoandro mandray hery sy hanova azy ho ao an herinaratra ho an'ny zavatra ilaina an-trano. Ny mahazatra indrindra dia karazana zavamaniry mifandray amin'ny herinaratra Grid: Izany dia manome hery anao amin'ny masoandro mandritra ny andro antoka fa afaka hitrandrahana ny hery ny hery Grid amin'ny alina na rehefa ny famokarana zavamaniry Tsy ampy ny manarona ny zavatra ilaina.
Toy izao ny fomba miasa photovoltaic Modules mba hiteraka herinaratra ho an'ny an-trano:
Ny photovoltaic Modules nametraka amin'ny tampon-trano mandray photons ny tara-masoandro, ary hiova azy ho eo an herinaratra. Ny fiovam-po ho angovo efa manomboka avy hatrany aorian'ny fifandraisana. Ny herinaratra navoakan'ny ny Modules no DC (Energia CC).
L 'inverter manova ny DC hery ho AC (AC hery) mety ny fampiasana an-trano. Ny farany dia azo ampiasaina amin'ny fahefana ny jiro sy ny fitaovana rehetra herinaratra, tonga TV, milina fanasan-damba, -javatra mampahalefaka, fanamainana volo sy ny vata fampangatsiahana.
Rehefa mamokatra angovo kokoa noho ny mandevona, ny mihoatra no sakafo an-jiro Grid.